Dhibic Wire haysa H15
Ku rid H15 isku haysa waxaa la sameeyey ee UV polymer u adkaysta oo jillaab bir galvanized.
clamps kale silig dhibic fiber indhaha si fudud yihiin in la soo qaado sida ay iska caabin ah si farsamaysan iyo dhexroor ee xarigga fiilooyinka 'Rasuul. Ku rid silig clamps dayada lagu rakibi karo on dhintay-dhamaadka, double network jidadka cable dhintay dhamaanayn. optic cable Fiber clamps dhibic design ogolaanaya adkeysan load ku filan oo aan warqada cable iyo dhaawac.
kiniisadaha oo dhammuna waxay u gudbeen imtixaanka siligga ah, waayo-aragnimada ay la kul min - 30 ° C ilaa imtixaanka +50 ° C, imtixaanka baaskiil heerkulka, imtixaanka gaboobaya, baaritaanka iska caabin ah daxalka iwm
Previous: kulanka top ACCC, ACSR Twin LJS
Barroosinka H15 haysa
waxa aadna Wire haysa
FTTH rakiban cable
FTTH H15 isku haysa
sanduuqyada joojinta indhaha